झलनाथ खनाल भन्छन्– एमाले बचाउने ब्रह्मास्त्र छ ! - बिरगंज खबर
​‘पार्टी कब्जा गरेको ओली गुटमा दक्षिणपन्थी भड्काव देखियो’ नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल वैचारिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । डल्लुस्थित खनाल निवासमा पुगेर हामीले सोध्यौं, ‘एमालेका आम कार्यकर्ताको भावनाअनुसार अब पार्टीको एकता बचाउने तपाईंसँग कुनै सूत्र छ ?’ जवाफमा खनालले एमालेलाई बचाउने ब्रह्मास्त्र बाँकी रहेको र अब त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाए ।
एमाले बनायौँ,एमाले बनाएपछि पनि निकै कालसम्म पार्टीको कार्यदिशा,विचार पनि ठीक थियो । नेतृत्वले पनि त्यसलाई अघि बढाइरह्यो । नेतृत्व फेरिँदै गयो । तर,फेरिएको नेतृत्वले पनि त्यो राजनीतिक कार्यदिशा,जो हामीले ३० को दशकमा विकसित ग-यौँ,४० को दशकमा स्थापित ग–यौँ,त्यही कार्यदिशाअनुरूप एमाले अघि बढेर आयो ।
हामी सातौँदेखि आठौँ महाधिवेशन बीचमा आइपुुग्दासम्म हाम्रो देशमा ०६२–६३ को ठूलो परिवर्तन भयो । त्यो सम्पन्न भइसकेपछि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन ग–यौँ । त्यो निर्वाचनमा तत्कालीन महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपालले आफू पराजित भएको र पार्टी पनि पराजित भएको हुनाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुुभयो । त्यसपछि पार्टीले मलाई फेरि महासचिव बनायो ।
हामी त्यो गुुटबन्दीविरुद्ध लडि नै रह्यौँ । त्यो गुटबन्दीले विभिन्न ढङ्गले पार्टीलाई सताउने काम गरि नै रह्यो । हामी त्यसविरुद्ध पनि जुध्दै रह्यौँ । तर,नवौँ महाधिवेशनसम्म आउँदा पनि त्यो गुटलाई हामीले उन्मूलन गर्न सकेनौँ । त्यो उन्मूलन गर्न नसक्नुका पछाडि हाम्रै साथीभाइहरूको सहयोग,त्यो गुटबन्दीलाई धेरै मात्रामा पुगिरह्यो । त्यसले गर्दा त्यो गुटबन्दी मौलाउँदै गयो र नवौँ महाधिवेशनमा वैचारिक,राजनीतिक कार्यदिशा त म आफै नेतृत्वमा भएको हुनाले हामीले ती कुरा अगाडि सा-यौँ । महाधिवेशनको दस्तावेजको ड्राफ्टिङ कमिटीको अध्यक्ष म आफै थिएँ र विभिन्न दस्तावेज हामीले बनायौँ । हामीले प्रतिवेदन बनायौँ । सङ्गठन प्रस्ताव बनायौँ । हामीले पार्टीको विधान बनायौँ । यस्ता दस्तावेज निर्माण गरेर ती कुरालाई पारित ग–यौँ । त्यो ठिकै ढङ्गले पारित भयो । तर नेतृत्व निर्माण गर्दा कमरेड केपी ओली नेतृत्वको समूह निर्वाचित भएर आयो । जो पारित भएका विचारहरूसँग प्रतिबद्ध थिएन त्यो प्रतिबद्ध थिएन र बिस्तारै पार्टीमा दक्षिणपन्थी भड्कावहरू हाबी हुँदै गए ।
पार्टी भित्रभित्रै दुईवटा समूहमा बाँडिन थाल्यो,दुईवटा विचार समूहमा । व्यक्तिको गुटभन्दा पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा दक्षिणपन्थी भड्काउले ग्रस्त समूह र पार्टीका सही वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को समूह । यी दुईवटा समूह प्रकट भए । यी दुुई समूहका बीचमा अन्तरसङ्घर्ष मन्द रूपले बढ्दै गयो । केही अवधिसम्म यसले त्यस्तो तीव्रता लिएन । महाधिवेशनले जे निर्णय ग¥यो त्यसलाई अब पालना गर्नुपर्छ,कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,जो नेतृत्व आएको छ,त्यो नेतृत्व महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा,नीति,सिद्धान्त अनुरूप अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा सबैको रह्यो ।
संविधान बनिसकेपछि देशमा पहिले स्थानीय निकायको चुनाव भयो । चुनावमा हामीले सबै बामपन्थीहरूलाई मिलाएर जाऊँ,त्यसमाथि पनि दुईवटा ठूला वामपन्थी समूह प्रकट भए,नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र । यो दुईवटा मिलाएर,दुईबीच कार्यगत एकता गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हामीले ग–यौँ । तर,केपी ओली र उहाँको धारका मान्छेले मानेनन् । त्यसले गर्दा स्थानीय निकायको चुनावमा हामी एक्ला एक्लै लड्यौँ ।
तर,यो उपलब्धिपछि हामीले विशेष प्रकारले सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । स्वाभाविक रूपले हाम्रो संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने भयो । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले पनि केपी ओलीलाई समर्थन ग¥यो र हामीले पनि ओलीलाई नै प्रस्ताव गर्नु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री बन्नुुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि उहाँभित्रको दक्षिणपन्थी अवसरवाद घनिभूत रूपमा प्रकट हुनथाल्यो ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा उहाँले क्याबिनेट फर्मेशन गर्दा माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई त लिनुपर्ने भयो नै । त्यतिबेला एमाले तर्फबाट अरू कसैलाई उहाँले मान्छे पनि ठान्नुभएन । सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो गुटका मान्छेलाई लिएर उहाँले एकलौटीरूपमा क्याबिनेट फर्मेसन गर्नुुभयो । त्योभन्दा कति सिनियर र अनुुभवीलाई तल छाडेर आफ्नो गुटका मान्छेलाई राख्नुभयो । पार्टी त सबैको थियो नि,सबैलाई समेट्नुुपर्ने थियो नि,समेट्नुुभएन । उहाँले गुटभन्दा बढी केही पनि देख्नुभएन । यो दक्षिणपन्थी चिन्तनको सबैभन्दा पहिलो अभिव्यक्ति थियो । यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले उहाँलाई अब सत्ताको केन्द्रीकरणतर्फ लग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले त जनतालाई पो शक्ति दिँदै जान्छ,विकेन्द्रीकरण पो गर्दै जान्छ त । अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ,जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जान्छ । किनकि,जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्,जनता इतिहासका चालक हुन् । जनता निर्णायक शक्ति हुन् । तर,त्यो दक्षिणपन्थी भड्कावबाट ग्रस्त कमरेड केपी ओलीको गुटले क्याबिनेट एकलौटी बनायो ।
दोस्रो कुरा,त्यो क्याबिनेट निर्माणपछि हामीले योजना आयोग बनाएको देख्यौँ । नेपाली समाज त जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अब समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको नयाँ युुगमा यो प्लानिङ कमिसन आएको थियो नि । यो नयाँ युगमा कसरी नयाँ योजना बनाउने,देशलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने,नयाँ आर्थिक र सामाजिक ढाँचा कसरी बनाउने ?कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने ?पुँजीवादी शोषणबाट यो समाजलाई फेरि कसरी मुक्त गर्ने ?हामीले त हिजो सामन्तवादको शोषणलाई मात्र अन्त्य गरेका छौँ । पुँजीवादको शोषण त बाँकी नै छ । त्यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रित गर्दै अन्त्य गर्दै जाने र क्रमशः समाजवादलाई कसरी विकसित गर्दै जाने । समाजवादका आधारहरू कसरी तयार गर्दै लाने,यो आवश्यकता देशका सामुु थियो । तर यो वस्तुगत आवश्यकतालाई उहाँले विल्कुलै नजरअन्दाज गर्नुभयो । हामीले यो आवश्यकतालाई उठाउने कोसिस ग-यौँ । तर उहाँले आफ्नो गुटका मान्छे मात्रै राखेर एकलौटी योजना आयोग बनाउनुभयो । यसमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह,विचार विमर्श छैन । पार्टीको कुनै निकायबाट निर्णय छैन । कमसे कम सुझाव त हुन्छ नि,त्यो पनि छैन । ४० वर्षभन्दा धेरै पार गरेर आएका नेकपा एमालेसँग आबद्ध धेरै डाक्टर छन्,विभिन्न पेसा व्यवसायमा जाने विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू छन् । उनीहरू सबै हेरेको हे–यैँ भए । यसरी उहाँले योजना आयोग बनाउँदा पनि एकलौटीकरण गर्नुुभयो ।
तेस्रो कुरा,उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुुभयो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउने हो भनेर तीन करोड नेपालीहरू व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । अब कम्युनिस्ट पार्टीले यो समाजलाई कसरी योभन्दा उन्नत स्तरमा लग्छ । उसका सामाजिक–आर्थिक नीतिहरू के हुुन्छन् ?यो सबैलाई जिज्ञासाको विषय थियो । तर नीति र कार्यक्रममा एउटा पनि नयाँ कुरा आएन । गुणात्मक परिवर्तनको कुरै भएन,उही मात्रात्मक विकासको कुरा आए । कार्यक्रम त आयो,तर त्यो नीति कार्यक्रममा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण,सांस्कृतिक रूपान्तरणका कुुनै कार्यक्रम आएनन् । त्यो पुुँजीवादीकरणकै मात्रै कार्यक्रम आए । दलाल पुुँजीपतिहरूलाई कसो गर्दा हित पुुग्छ,यिनै खालका नीति र कार्यक्रम मात्रै आए । पुँजीवादलाई हित हुने पनि आएन,समाजवादको त कुरै छाडौँ । एक पटक हो र,३–३ वर्षसम्म नीति तथा कार्यक्रम आए । एक पटक त पहिलो पटक राम्रोसँग तयारी पुुगेन होला,हामीले प्रतीक्षा ग-यौँ । तर दोस्रो आयो,त्यस्तै छ । तेस्रो आयो,त्यस्तै छ । यो त कुनै पनि कुरा तीन चोटि दोहोरिन्छ भने त्यहाँ नियतले काम गरेको हुन्छ । तीन÷तीनवटा नीति कार्यक्रम ल्याउँदा उहाँ विल्कुलै पुुँजीवादपन्थी र दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलतर्फ लागेको कुुरा प्रष्ट देखियो । यो दक्षिणपन्थी अवसरवादको अर्को एउटा अभिव्यक्ति हो ।
चौथो कुरा,नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट आयो । तीन तीनवटा बजेट आए । ती बजेटले देशलाई के माग गरिरहेको थियो ?कसरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरिन्छ ?स्वतन्त्र अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गरिन्छ ?सामन्तवादका अवशेषहरूलाई कसरी उन्मूलन गरिन्छ ?कृषि क्रान्ति अब कसरी हुन्छ ?भूमि क्रान्ति अब कसरी हुन्छ ?शिक्षामा क्रान्ति अब कसरी हुन्छ ?हाम्रो देशको स्वास्थ व्यवस्थामा कसरी क्रान्ति हुन्छ ?यो देशको साधन–स्रोतलाई जनतालाई हित गर्ने गरी जनतालाई मालिक बनाएर उपभोग गर्ने कुरा कस्ता नीति आउँछन् ?जनताले यो खोजिरहेका थिए,केही पाएनन् । बजेटमा पनि नयाँ गुणात्मक परिवर्तनका कुरा आएनन् । जहाँसम्म सडक बनाउने कुरा छन्,पुल बनाउने कुरा छन्,यी त जसले पनि गर्दै आएका कुरा हुन् नि । पञ्चायतकाल पनि यी हुँदै आए,०४६ सालपछिका सरकारले पनि गर्दै आए,त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो भने अब कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ क्रान्तिकारी नेतृत्वको के आवश्यकता थियो त ?जनताले यो खोज्दै गए तर पाएनन् ।
पाँचौँ कुरा,हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग समेत मिलेर निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी ग¥यो । त्यो संयुक्त घोषणापत्रमा हामीले दर्जनौँ–दर्जन प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छौँ । सिङ्गो हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा हामी कसरी रूपान्तरण गर्छौँ,अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्छौं,हामी कृषिलाई के गर्छौं ?उद्योगलाई के गर्छौं ?अन्य विविध क्षेत्रमा हामी के गर्छौं ?त्यसबारेमा हाम्रा नीतिका शृङ्खलाहरू अघि सारेका छौँ । त्यो हामी सबैले मिहिनेत गरेरै बनाएको हो । तर,त्यो घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू एउटा पनि लागू भएनन् । उहाँले ती कुरा ध्यानमै राख्नुभएन । यसलाई मैले मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ,हिजो आम जनताले हामीलाई त्यो घोषणापत्रका आधारमा भोट हालेका हुन् भन्ने सबै बिर्सनुभयो । उहाँले मलाई भोट आएको भन्ने ठान्नुभयो । सिङ्गो आएको भोट केपी ओलीको लोकप्रियताले आएको भन्ने उहाँलाई लाग्यो । त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुु–याइदियो र उहाँका वरिपरि भएका मान्छेले पनि त्यसै कुरालाई ठीक हो,ठीक हो भनेर ताली पिट्ने काम गरे ।
क्याबिनेट निर्माण, राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र घोषणापत्रको कार्यान्वयनका क्रममा ओलीमा दक्षिणपन्थी भड्काउ देखिएको भनेर यहाँले ५ वटा बुँदामा व्याख्या गर्नुभयो । यो त सरकारको कामसँग सम्बन्धित विषय हो । वैचारिक–राजनीतिक हिसाबले चाहिँ ओलीमा दक्षिणपन्थी भड्काव छ भनेर कसरी मान्ने ?
तपार्इंले यी कुरालाई नै अझै गहिराइमा बुुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका मूल–मूल अभिव्यक्ति के हुन् ?म त्यसमा गइरहेको छु । कुनै पनि पार्टी सत्तामा पुुगिसकेपछि उसले आफ्ना नीतिहरूलाई त राज्यको नीति बनाएर लागू गर्नुप–यो नि । त्यसकारण ती नीतिहरू कसरी आए,केपी ओली नेतृत्वमा के नीति आयो ?त्यसपछि,५ सयभन्दा बढी नियुक्ति तपार्इंले देख्नुुभयो । ती नियुक्तिमा पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा,लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुु-याएका मानिसहरू हुन्,ती योगदान गरेका मानिसहरूलाई उहाँले देख्नुभएन । सबै आफ्नो गुटका मान्छे,आफ्नो प्रशंसक मान्छेहरूलाई भर्ती गर्नुुभयो र सरकारलाई उहाँले आफ्नो गुटको भर्तीकेन्द्र बनाउनुुुभयो । यो उहाँको अर्को दक्षिणपन्थी चिन्तनको अभिव्यक्ति हो ।
तपाईंले संसद्मा विभिन्न विधेयक आएको देख्नुुभयो,ती विधेयक एकपछि अर्को विवादमा आए । कुनै पनि विधेयकमा पार्टीसँग सरसल्लाह भएन । विचार विमर्श भएन । पार्टीका वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा के हुन् ?नीतिहरू के हुन् ?त्यो कुरालाई ध्यानमा राखिएन र आफ्नै प्रकारले या त ब्युरोक्रेसीले के भन्छ त्यही,या आफ्नो कोटरीले जे भन्छ,त्यही आधारमा विधेयक आए । विवादित भएर कतिपय विधेयकविरुद्ध काठमाडौँमा विद्रोह नै भयो । जस्तो गुठी विधेयकका समेत विद्रोह भएको देख्नुुभयो । पार्टीसँग विचार विमर्श गरेर ल्याएको भए त्यस्तो हुने थिएन । यी सबै दक्षिणपन्थी चिन्तन हुन् ।
अर्को भनेको,अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा हो । दुुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बन्यो,यो सरकार त संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बन्यो । तर पार्टी पछि एकीकृत भयो । एकीकृत पार्टी पनि नीतिनिष्ठ ढङ्गले र विधिनिष्ठ ढङ्गले एकीकृत भएन । अचानक उहाँको इच्छा बमोजिम एकीकृत गरियो । त्यो एकीकृत भए मात्रै सम्भवतः आफ्नो सत्ता लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना उहाँले देख्नुभयो । आफ्नो सत्ता टिकाउने कुराको निम्ति जे गर्न सहज हुन्छ । त्यही मात्रै कदम चाल्न थाल्नुुभयो । पार्टीको आमूल परिवर्तन परिवर्तनको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाबाट विचलित भएर उहाँ गुटको हिततर्फ लाग्नुभयो र त्यही गुटको हित बमोजिम उहाँले एकीकरण गर्नुभयो ।
एकीकरण गरेर पार्टीको सङ्गठनात्मक कुरालाई कसरी धुलोपिठो बनाइदिनुुभयो भने माथि एकीकरण गरेर दुुईवटा केन्द्रीय कमिटीलाई एउटै बनाइयो,तलका सम्पूर्ण पार्टी विघटन । त्यति मात्रै नभएर जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि दुुवै पार्टीका विघटन भएको घोषणा गरिदिनुभयो । यहाँभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ,सक्रिय भइरहेका मानिसहरू एकाएक ठप्प भए । पार्टीमा भएका ४–५ लाख सदस्य एकाएक ठप्प भए । कमिटी पनि छैनन् । पार्टी पनि छैन । तीन तीन वर्षसम्म उहाँको सङ्गठनात्मक कार्यदिशा यही हो ।
उहाँले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा पूरै अराजकता मच्चाउनुुभयो,जनवादी केन्द्रीयता कहाँ गयो गयो । पार्टीको विधान,विधि कहाँ गयो गयो । तर,उहाँलाई पार्टीले बालुवाको थुुप्रोजस्तो बनाइदियो,तीन वर्षसम्म । न एकीकरणको योजना छ,न एकीकरण गर्न दिइन्छ । आफ्नो गुटको मान्छे अगुुवाइमा आउँछ भने एकीकरण गर्ने,नत्र नगर्ने । कुनै मापदण्ड पनि छैन,केही पनि छैन ।
उहाँको जुन वैचारिक–राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको अवसरवाद हो । त्यो सङ्गठनमा यस ढङ्गले प्रकट भएर आयो । घोर दक्षिणपन्थी,अराजकतावादी अवसरवाद,यसरी सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा पनि पार्टीव्यापी रूपमा विचलन,अराजकता,शून्यता भयो । एकीकरणपछि हाम्रा तलका कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेन । कहिल्यै पार्टीको प्रशिक्षण भएन । पार्टीले यो काम गर्नुप–यो भनेर कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिने काम भएन । त्यो नदिएपछि स्वाभाविक रूपमा तलको पङ्क्ति अन्योलमा बस्यो । झन्डै तीन वर्षसम्म एकता पनि हुन सकेन । अर्को,भित्रभित्रै उहाँले पार्टीलाई थाहा पत्तै नदिई विभिन्न गुप्त सम्झौता गर्नुभएको रहेछ ।
कस्तो गुप्त सम्झौता ?
प्रधानमन्त्री पनि आलो–पालो गर्ने आदि इत्यादि । यस्ता सम्झौता रहेछन् । चार पाँच बुँदाको एउटा सम्झौता रहेछ । त्यो बिस्तारै प्रकट भयो । त्यसपछि हामीले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भयो । यस्तो पनि गर्ने भनेर पार्टीमा एकखालको अविश्वास सिर्जना हुन थाल्यो । भित्राभित्रै बहसहरू सिर्जना हुन थाले तर उहाँले गर्नुुभएको गुप्त सहमति पनि पालना गर्नुु भएन । अर्का अध्यक्षसँग सहमति रहेछ,गुुप्त सहमति,त्यो पनि लागू गर्नुुभएन । अर्को अध्यक्ष पनि असहमत र असन्तुुष्ट हुन थाल्नुुभयो । पार्टीभित्र त एकलौटीकरण गरिएकै थियो । त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले यसरी पार्टीको एकतामाथि पनि आँच ल्याउन थाल्यो । आफ्नो एकलौटी गर्ने र एकता गर्दा पनि कुनै आधारमा नगर्ने काम भयो ।
सांस्कृतिकरुपमा पनि प्रश्नहरु उठेका हुन् ? जस्तै– रामको मूर्ति बनाउने कुरा…..
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि अनेक प्रकारका विचलन देखिए । पार्टीमा जुन हिसाबले आफ्नै खालको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने थियो,विधिसम्मत संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने थियो । कमिटीको विकास गर्नुपर्ने थियो,क्रान्तिकारी कार्यशैलीको विकास गर्नुपर्ने थियो,ती कुरा केही पनि हुन सकेनन् । अनि,मुलुकको सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि जुन ढङ्गको रूपान्तरणको आवश्यकता थियो । प्रगतिशील संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने थियो,त्यो संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा पनि उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुभएन ।
बरु पशुपतिनाथमा सुनका गजुर चढाउने,परम्परालाई तोडेर पनि सुनका गजुर चढाउनेजस्ता काम गर्न उहाँ अघि बढ्नुुभयो । चितवनको अयोध्यामा राममन्दिर बनाउने काममा अहिले लाग्नुुभएको छ । बालुवाटारमा हनुमान र सीताका र रामका मूर्ति बनाएर त्यहाँबाट लावालस्कर भएर चितवन पठाउनुुभयो । उहाँ (ओली) को भौतिकवादी चिन्तनको टाट पल्टाइ यही हो । यो टाट पल्टाइ हामी सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि देख्छौँ ।
त्यसकारण,उहाँले जुन वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा प्रकट गरेर ल्याउनुुभयो । हाम्रो पार्टीले अघि सारिरहेका क्रान्तिकारी वैचारिक,राजनीतिक,सैद्धान्तिक कार्यदिशाका विपरीत छन् । यसले गर्दा दुुईवटा कार्यदिशाका बीचमा विस्तारै टकराव बढ्दै जान थाल्यो । यसको परिणामस्वरूप एकता भएको पार्टी पनि खत्तम भयो ।
अहिले एमालेभित्र गहिरो संकट देखिएको छ । यद्यपि एमालेको एकता बचोस् भन्ने चाहना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुमा देखिन्छ । यहाँले अहिले गरेको व्याख्याअनुसार अब केपी ओलीसँग सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि सम्झौताको कुनै बिन्दुु पनि छ ?यो अन्तरसङ्घर्षको मिलनबिन्दु छ कि छैन ?
वैचारिक र सैद्धान्तिक सङ्घर्षको क्षेत्रमा सम्झौता हुन सक्दैन । नीतिनिष्ठ सङ्घर्ष हुन्छ,सम्झौताविहीन सङ्घर्ष हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सम्झौताहरू हुन्छन्,विभिन्न सम्झौता हुन्छन् । राजनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ,कहिलेकाहीँ फड्को मारेर अघि बढ्ने हुन्छ । राजनीतिमा यस्ता कुरा आउँछन् । तर,सिद्धान्तमा कहिल्यै मोलतोल हुँदैन । विचारमा मोलतोल हुँदैन । उहाँसँग अहिले वैचारिक र राजनीतिक दुुवै क्षेत्रमा सङ्घर्ष छ । यो सङ्घर्षले नै पार्टीको रूपान्तरणलाई निर्धारण गर्छ ।
अहिले आम कार्यकर्ताहरूमा यो पार्टीको एकता बचे हुन्थ्यो भन्ने ठूलो भावना छ । त्यो भावनालाई मैले देखेको र बुुझेको छुु । म आफैं पनि पार्टीको एकता जोगाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छुु ।
त्यसकारण अहिले हामी अन्तरसङ्घर्षको विशिष्ट प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छौँ । यो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष हो । अन्तरसङ्घर्षहरू कहिलेकाहीँ ठूलो मतभिन्तताका रूपमा देखिए पनि क्रमिकरूपले अघि बढेर सहमतिमा पुुग्न सक्छन्,रूपान्तरण हुन सक्छन् । मान्छेले गल्तीलाई महसुस गर्दै गयो भने रूपान्तरण हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ मान्छेले पोजिसन पनि छोड्छन् । मैले सकिनँ,अब नयाँ मान्छेहरूले गर्नुस् भन्छन् । त्यसरी पनि सहमति हुनसक्छ । तर,विचार र सिद्धान्तमा मोलतोल हुँदैन ।
यहाँले २०४६ सालमा मदन भण्डारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको उदाहरण छ । अहिले पनि एउटा सङ्केत गर्नुभयो कि कसैले सकेन भने पोजिसन छोड्न सक्छ । एमालेका आम कार्यकर्ताको भावनाअनुसार पार्टीको एकता बचाउने तपाईंसँग कुनै सूत्र छ ?एमालेलाई मिलाउने त्यस्तो सूत्र के होला ?
एमालेलाई मिलाउने सबैभन्दा निर्णायक कुरा यसको वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा र नीति नै हो । यसमा मिल्दै मिलिएन भने मिल्न धेरै गाह्रो हुन्छ । तर,यसलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने हाम्रो देशको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा युवा क्रान्तिकारीहरूसँग त्यो तागत छ । त्यो तागतलाई उहाँहरूले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
म जतिबेला युवा थिएँ,२० वर्षको उमेर हुँदा मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलाम जिल्ला गठन गरेको थिएँ । मलाई कुनै नेताले निर्देशन दिएर त्यतिबेलाको नेतृत्वले मार्गदर्शन गरेर बनाएको होइन । मैले आफ्नो दिमागले जे बुुझेँ,कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अरूले यो देश बचाउन पनि सक्दैनन् र प्रगतितर्फ लैजान पनि सक्दैनन् भनेर कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउनुुपर्छ भनेर मैले कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिगत रूपमा निर्माण थालेँ । २०२६ सालबाट निर्माण थालेपछि देशभरका सारा कम्युनिस्ट नेतासँग भेटघाट र कुराकानी गरेँ । मैले आफूलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू पाइनँ ।
०३२ सालमा पुुग्दा हामी आठवटा जिल्लाका साथी मिलेर हामीले नयाँ ढङ्गले कोअर्डिनेसन बनाऔँ,सबै साथीहरूलाई वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा एकताबद्ध गरौँ र नयाँ ढङ्गले एकीकृत पार्टी निर्माणको थालनी गरौँ भन्यौँ । त्यतिबेलाका बूढापाकाले पार्टीलाई एकीकृत गरेको होइन,युवाहरूले गरेको हो । त्यसपछि हामी आठ जनाले मिलेर यो पुनर्गठन र एकीकरणको अभियान थालनी ग-यौँ । यही अभियानको अन्तिम संस्करण हो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण । हामीले त्यसभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि ३५ वटा समूहहरू एकताबद्ध गरेर आयौँ ।
शीर्ष भनिएका ‘बूढा’ नेताहरूबाट चाहिँ अब एमाले पार लाग्ने देख्नुहुन्न ?
हामीले जुन समूहको नेतृत्व गरिरहेका छौँ त्यो समूहमा म ७२ वर्ष पुगेको नेता हुँ । हाम्रो आयु त सीमित नै हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा लामो यात्रामा जानु नै पर्नेछ । यो यात्रामा कसरी जाने ?म बाटो देखाउन सक्छु,मलाई विश्वास छ । तर,पनि मेचीदेखि महाकाली,हिमालदेखि पहाड दौडनुपर्छ नेताहरूले । यो दौडने काममा मेरो विचारमा ७० वर्ष उमेर पुगेका मान्छेले चाहाना हुँदाहुँदै पनि धैरै भ्याउन सक्दैन । उनीहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक क्षमता पनि हुनसक्छ । तर,सङ्गठनात्मक हिसाबले काम गर्न त्यो उमेरका मान्छेलाई निकै कठिन हुन्छ । त्यसो हुनाले उहाँहरूले बुद्धि पु¥याएर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनताका जतिबेला म ड्राफ्टिङ कमिटीमा थिएँ,विधान बनाउँदा हामीले एउटा प्रावधान राख्यौँ । त्यसमा अब ७० वर्षलाई एउटा आधार वर्ष बनाएर त्योभन्दा माथिका साथीहरू सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने भनेर ।
७० वर्षमुनिका साथीहरूलाई कार्यकारी भूमिका दिने त्योभन्दा माथिकालाई पार्टीमा योगदान गरिरहन दिने तर सल्लाहकारको भूमिका दिने र नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी दिन त्यो अवधारणा वा प्रावधान राखिएको हो । त्यो प्रावधान सुविचारित ढङ्गले राखिएको हो,सर्वसम्मत पारित भएको हो । त्यसैले त्यो प्रावधानलाई कुनै पनि बहानामा हटाउनु नैतिकताभित्रको कुरा हुँदैन ।
७० वर्ष पार गरेका वा पार गरिरहेका कुनै पनि नेताहरूबाट देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सम्याएर लानेभन्दा उनीहरूले आफ्ना अनुभवहरू दिएर युवालाई अगाडि बढाएर,अग्रपङ्क्तिमा राखेर,जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
केपी ओलीले जतिसुकै गरे पनि उहाँको समूहलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका धेरै युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा हाल्दै हुनुहुन्छ । उहाँले एकीकृत भएको पार्टी फुटाउनुभयो । एमाले पनि उहाँका क्रियाकलापले विभाजन र विघटनतर्फ जाँदैछ ।
हरेक दिन तपाईंले देखिरहनुभएको छ,हिजो मात्रै पनि कति स्थायी कमिटीका साथीहरूलाई पार्टीबाट निकालेर अरू आफ्ना भारदारहरूलाई भर्ती गर्नुभयो भन्ने मैले सुन्दैछु । पार्टीमा भारदार,उद्योगपति,व्यापारी र दलाल पुँजीपतिहरूलाई भर्ती गरेर यो पार्टीलाई निरन्तर अधोगतितर्फ रूपान्तरण गर्नेबाहेक उहाँले केही गरेको देखिँदैन । दक्षिणपन्थी चिन्तनले ल्याउने कुरा त्यही हो र उहाँ त्यही काममा लाग्नुभएको छ । उहाँको नेतृत्वमा अरूको भविष्य पनि समाप्त हुँदैछ । अब विस्तारै उहाँको पछाडि लागेर गएका मान्छेहरूले अहिले यो कुरा नबुझे पनि अब बुझ्दै जानेछन् ।
अहिलेको अवस्थामा पनि दुवै समूहमा युवाको ठूलो पङ्क्ति छ । ती युवा एक ठाउँमा आउनुपर्छ र उनीहरूले सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा एकताको प्रयत्न गर्नुपर्छ । अरू कुनै आधारमा एकता हुँदैन । सही कार्यदिशाको आधारमा मात्रै सङ्गठनात्मक एकता हुन्छ ।
यसको अर्थ, दुबै समूहका युवाले चाहे भने एमालेभित्रको एकता जोगाउन सक्छन् भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?
हो । युवाहरूमा त्यो ब्रह्मास्त्र छ । त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । प्रयोग गर्न सक्नुभएन भने उहाँहरूले आफ्नै भविष्यमा आगो लगाउनुहुन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा बीस र तीसको दशकमा मेरो पङ्क्तिले जुन ढङ्गको भूमिका खेल्यो,त्यतिबेला हामी ज्वाजल्यमान युवा थियौँ । हामी अँगार र ढुङ्गा खान सक्थ्यौँ । त्यो तागत थियो र हामीले आँट गर्याैँ,कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ ।
म दावाका साथ भन्छु हाम्रो पङ्क्तिले यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले सम्यायो । पहिलो पुस्ताले गर्नसक्नुभएको थिएन,उहाँहरूको लिगेसीलाई हामीले समात्यौँ । उहाँहरूका असल परम्परालाई समात्यौँ । असल कार्यशैलीलाई पनि समात्यौँ र लेनिनले भनेजस्तै देशको विद्यमान ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्यौँ । त्यो विश्लेषण गरेर नेपाली क्रान्तिका कार्यदिशा र नीति के हुन् ?समाजको वर्गविश्लेषण के हो ?यसका वर्गीय असमानता र अन्तरविरोध के हुन् ?यसलाई रूपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ ?कस्तो बाटोबाट क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सबै हामीले आविष्कार गरेको कुरा हो ।
मैले मार्क्स र एङ्गेल्सका भोल्युमहरू पढेँ । लेनिनका ४५ वटा भोल्युम र स्टालिनका १४ वटा भोल्युम पढेँ तर कहीँ पनि नेपाली क्रान्तिको बाटो भेटिनँ । कहीँ पनि नेपाली राजनीति यसरी गर भन्ने छैन । यी सम्पूर्ण सैद्धान्तिक भण्डारहरूबाट तीनवटा कुरा सिकेँ ।
पहिलो–सही दृष्टिकोण लिएर हिँड । क्रान्तिकारी वर्ग दृष्टिकोण लिएर हिँड । सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण लिएर हिँड । त्यो दृष्टिकोणमा अविचलित होऊ ।
दोस्रो–सधैँभरि वर्गीय अडानमा बस । वर्गीय अडान कहिल्यै नछोड । वर्गीय अडानका साथ परिस्थितिको विश्लेषण गर । समाजका विभिन्न वर्गहरूको विश्लेषण गर । सबभन्दा क्रान्तिकारी वर्ग भनेको सर्वहारा श्रमिक वर्ग हो । त्यो वर्गको हितलाई सर्वोपरी राखेर समाजवादको लक्ष्यलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढ भनेर मैले सिकेको हो ।
तेस्रो–मैले सिकेको कुरा नयाँ मेथर्ड (विधि) । मार्क्सवादी मेथर्ड । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मेथर्ड । विश्लेषणात्मक मेथर्ड । हरेक चिजको विकास हुन्छ र उत्पत्ति हुन्छ र त्यसको अन्त्य हुन्छ । हरेक चिज गतिमा मात्र बाच्न सक्छ । जसको गति अन्त्य हुन्छ,उसको मृत्यु हुन्छ । यी तीनवटा कुरा मैले मार्क्सवादका विभिन्न ठेलीको अध्ययन र नेताहरूबाट सिकेँ ।
हामी जोकसैले पनि मार्क्सवाद पढेर अरू विभिन्न देशका रोचक सङ्घर्ष या क्रान्तिका कहानीहरू हेर्न पाइन्छ । तर,आफ्नो देशको बाटो तय गर्ने मार्क्सवादले दिएको अचूक अस्त्र भनेको ठीक अडान लेऊ,ठीक दृष्टिकोण राख र ठीक मेथर्ड प्रयोग गरेर अगाडि बढ भन्ने नै हो ।
नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता ल्याउनुपर्छ भनेर अघि नै भनिसक्नुभयो । एमालेमा अहिले एउटा धारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ,अर्को धारको तपाईंहरूले । केपी ओली पक्षले धमाधम कारबाही गरेर तपाईंहरूले नेतृत्व गरेको धारलाई समाप्त पार्दै गरेको अवस्था छ । तपाईंहरूले अघि सरेर गरेको अन्तरसङ्घर्षको परिणामचाहिँ कहिले आउँछ ?
हामीलाई कारबाही गरेर,हामीलाई डण्डा देखाएर,हामीमाथि अनुशासनको धाकधम्की दिएर हामीलाई समाप्त गर्न कसैले सक्दैन । सही विचार त्यसरी सकिँदैन ।
तर, व्यवहारिक रूपमा त तपाईंहरु निरीह देखिनुभएको छ नि ?
तपाईंलाई कसैले पद र ओहदाबाट हटाइदिन सक्छ । कुनै पनि पद र ओहोदा भनेका अस्थायी हुन् । स्थायी भनेको विचार हो,नीति हो,सिद्धान्त हो । हामीलाई विचार र नीतिबाट कसैले राजीनामा गराउन सक्छ ?कसैले हटाउन सक्छ ?कसैले सक्दैन । यस्ता पदहरू आइरहन्छन्,गइरहन्छन् । सही विचार र पार्टी छ भने पद प्राप्त गर्नसक्नुहुन्छ । सही विचार र पार्टी पनि छैन र निराश हुनुहुन्छ र पदका निम्ति काम गर्नुहुन्छ भने केही गर्न सक्नुहुन्न ।
त्यसकारण,हामी अहिले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ,एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ,हामी सिद्धिने शक्ति कदापि होइनौँ । यो त नवीन शक्ति हो । नेपाली समाजमा नयाँ आशा जगाउने शक्ति हो । नेतृत्वले गद्दारी गर्यो भने पनि त्यसविरुद्ध जुधेर पनि आन्दोलन अगाडि बढ्ने रहेछ । त्यस्तो उदाहरण र नमुना बन्नेछ यो ।
तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको यो निरीह शब्द हाम्रो डिक्सनरीमा छैन । त्यो तपाईंहरू जस्ता साथीको डिक्सनरीमा हुन सक्छ । तपाईंहरू डराउनुहोला,निरीह पनि बन्नुहोला,हामी हुँदैनौँ । हामी भनेको बलिरहेको बत्ती जस्तै हौँ । बत्तीले अन्धकारसँग कहिल्यै सम्झौता गर्दैन ।
तपाईंहरूकै नेता कार्यकर्ताले प्रयोग गर्ने गरेको निरीह शब्द हामीले सापटी लिएको हो, तपाईंहरू निरीह बनेको होइन ?
होला,हाम्रा कार्यकर्तामध्ये कुनै एकले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको हुनसक्छ । तर,हाम्रो समूहले त्यो शब्द प्रयोग गर्दैन । हाम्रो क्रान्तिकारी विचारले यस्तो कुरा प्रयोग गर्दैन । हामी एकबाट पनि अनेक हुँदै जान्छौैँ । सानोबाट ठूलो र कमजोरबाट बलियो हुँदै जान्छौँ । तर,हामी सही कुराको पक्षमा उभिनसक्नुपर्छ पनि भनेका छौँ ।
कतिपयले एमाले अब फुटि नै सक्यो भनेका छन् । योसँगै तपाईंहरूको समूह फुटेपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ नि ?
हामीले त्यस्तो केही पनि गृहकार्य गरेका छैनौँ । हामी यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत अवस्थाबाट उठाएर ल्याउने मान्छे हौँ । त्यसमा म,माधव नेपाल,अमृत बोहोरा,मुकुन्द न्यौपानेलगायतले यो पार्टीलाई क्षतविक्षत भएका बेलामा नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर २०३२ सालबाट अभियान चलाएका हौँ । आठ जना थियौँ,तीमध्ये तीन जना निष्क्रिय हुनुभयो । एकजना मारिनुभयो । हामी आठजनाले यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको उभार सिर्जना गर्न सक्यौँ ।
कहिलेकाहीँ पार्टीमा नेतृत्व एउटाले कब्जा गर्नसक्छ । तर,पार्टीका सबै विचार,नीति,सिद्धान्त र आदर्श कब्जा गर्न सक्दैन । क्रान्तिकारीहरूले अगाडि बढाउँछन्,हामी बढाउँछाँै । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले पनि आठ/दसवटा समूह छन्,तिनलाई पनि हामी सम्भव भएसम्म एकताबद्ध बनाएर लैजान्छौँ । तपाईंले सोधेको दोस्रो प्रश्न माओवादीसँग एकता गर्ने भन्ने कुरा गलत हो । हाम्रो गृहकार्य भनेको नेकपा एमालेलाई पुनर्गठित गर्ने,क्रान्तिकारी धारमा उभ्याउने हो ।
एमाले पुनर्गठित गर्छौं भन्नुहुन्छ । एमालेको कार्यालय पनि जानुहुन्न, पार्टी बैठकमा जानुहुन्न । अनि बाहिर बाहिरैबाट सोचेजस्तो पुनर्गठन सम्भव होला ?
नेकपाको एमालेको अहिले कार्यालय छैन । नेकपा एकीकृत भएको अवस्थामा धुम्बाराहीमा कार्यालय थियो । त्योभन्दा अघि बल्खुमा कार्यालय थियो । बल्खुको कार्यालय भूकम्पले ध्वस्त भएपछि धुम्बराहीमा सारेको हो । त्यो पनि के–के लफडा छन्,हाम्रो हातबाट गैसक्यो । अहिले पार्टीमा रहेको अर्को गुटले कुन मारवाडीको जग्गा लिएको छ भन्ने म सुन्दैछु । त्यो कार्यालय छैन । हामीले आवाश्यकता अनुसार कार्यालय बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिको उपज हुन्छ । यो क्रमशः आफ्नो प्रक्रियामा छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि ती सब कुरा देखिन्छन् ।
आज हामी हामी लोकतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ । आज त्यो आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
वैशाख ११ गते ऐतिहासिक र आमूल परिवर्तनको दिन हो । नेपाली समाज जनवादी क्रान्तिको ५८ वर्षको कार्यकाललाई पार गरेर समाजवादी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दिन हो वैशाख ११ । त्यसैले यो ऐतिहासिक दिन हो । कसैले मेटेर मेटिँदैन । कोही प्रतिगमनमा जाओस् वा निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्कियोस् तर जुन वस्तुगत परिवर्तन भएको छ नेपालमा त्यसलाई कसैले मेटेर मेट्न सक्दैन ।
त्यो क्रान्तिले ल्याएको सवभन्दा ठूलो उपलब्धि यो देशबाट सामन्तवादलाई समाप्त गर्नु हो । नेपालको आफ्नै विशिष्ट क्रान्तिमार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र सामन्तवादलाई हामीले समाप्त गर्यौँ । सामन्तवादको आर्थिक आधार पनि समाप्त भयो । अधिसंरचना पनि समाप्त भयो । ठेक्का,कुत,अधियाँ,जस्ता सामन्त वर्गका मुख्य रूपहरू अन्त्य भए । अब व्याज बैङ्कले दिन्छ । बैङ्किङ सिस्टम अहिले देशव्यापी हाबी हँुदै गएको छ । २०६३ सालको परिवर्तनले उपरी ढाँचामा रहेको सामन्तवादलाई पनि खत्तम गर्यो । २ हजार वर्षदेखि नेपालमा राजतन्त्रको शासन थियो । सामन्तवादको जग समाप्त भएपछि त्यो पनि समाप्त हुनु अनिवार्य थियो,भयो । नेपाली जनतालाई त्यो जनवादी अधिकारहरू उपलब्ध गरायो ।
अहिले हामीले जनवादी क्रान्तिको कालखण्डमा नयाँ जनवाद ल्याउँछौँ । हामीले राष्ट्रिय जनवाद ल्याउँछौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउँछौँ । लोक जनवाद या जनताको जनवाद ल्याउँछौ भनेका थियौँ,त्यो यही हो ल्यायौँ । यसरी बनाएको संविधानले यो कुरा स्थापित गरेको छ ।
जनताको जनवाद स्थपित हुनु भनेको जनतालाई लोकतान्त्रिक हक र अधिकारले सुसम्पन्न गर्ने कुरा मात्रै हो । हिजो नभएको अधिकार अहिले गाउँगाउँ,कुनाकाप्चाका मानिसले यो प्राप्त गरेका छन् । वैशाख ११ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपाली जनतालाई गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र दियो । सबै वर्ग,जाति र समुदायका अधिकार दियो । जुन संविधानअन्तर्गत अरू थुप्रै ऐन पनि बनेका छन्,त्यसमार्फत जनताका मौलिक हकअधिकारहरूलाई पनि संस्थागत गरिएको छ ।
यो देशको सामाजिक,आर्थिक ढाँचा वर्गीयरूपले बदलियो । तर,वर्गीयरूपले बदलिएको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको समाजवादी रूपान्तरणले हो । त्यो रूपान्तरणको कामचाहिँ केही पनि हुन सकेको छैन ।
समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्व स्थापित हुन नसक्दा रूपान्तरणको काम हुन नसकेको हो कि ?
हो । त्यो समयको मागलाई आपूर्ति गर्ने,पार्टीका सोच,विचार,दर्शन र नीतिहरूलाई कार्यादिशालाई लागू गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा पछिल्लो (नवाँै महाधिवेशनपछि) समय हाम्रो पार्टीमा दक्षिणपन्थी भड्काउ हावी हुन पुग्यो । त्यो दक्षिणपन्थी भड्कावको मुख्य नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनुभएको छ ।
उहाँले नेकपा एमालेलाई निरन्तर पुँजीवादी दिशातर्फ लानुभएको छ । पार्टी सदस्य कसरी भन्ने मापदण्ड नै नपुगेका मान्छेलाई धमाधम भर्ती गर्नुभएको छ । अस्ति त २४० जना व्यापारी,व्यवसायीलाई पार्टी सदस्यता दिनुभयो रे । उहाँका आर्थिक सल्लाहकार को भन्दा मोती दुगड । अस्ति माधव नेपाल र उहाँको बीचमा वार्ता गराएको पनि उनैले रे !
यसरी उहाँले पार्टीलाई पुँजीवादीकरण गर्दै लानुभएको छ । नेपाली जनताले जुन आशा र अपेक्षाका साथ २०६२–६३ मा समाज समाजवादउन्मुख भएर जान्छ भनेर आन्दोलनमा त्याग गरेका थिए,त्यता उन्मुख गराउन सकिएको छैन ।
यस्तो स्थितिमा यहाँले भनेजस्तो समयानुकूल नेतृत्व आउँछ भनेर कसरी आशावादी हुने ?
अब २०६२–०६३ को जनक्रान्तिको अगाडि कोही जानै सक्दैन । त्यो सकियो । इतिहासले त्यसलाई बन्द गरिसक्यो । इतिहास आमरूपमै वान स्टेप फरवार्ड भइसक्यो । अब समाजवादउन्मुख भएर समाजलाई कसरी गर्ने भनेर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । वैशाख ११ हाम्रो एउटा दिवसको दिन पनि हो । यस दिनमा यो देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले,लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले,समाजवादका पक्षधरहरूले आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजीमा,निर्माणमा र आविष्कारमा लाग्नुपर्छ ।
त्यस्तो नयाँ नेतृत्वले नलिई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । यो नारा मैले नवौँ महाधिवेशनमा अगाडि सारेको हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब ७० वर्ष पुग्दैछ । आउने ३० वर्षमा के काम गर्छन् त कम्युनिस्टहरूले ?त्यो कामका लागि हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने गरी जानुपर्छ । समाजवादबिना त्यो बन्न सक्दैन । समाजवाद ल्यायौँ भने मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुन्छ । समाजवादले मात्रै नेपाली समाजलाई बचाउन सक्छ । समाजवादले मात्रै हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई,राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन सक्छ । समाजलाई अग्रगतितर्फ समृद्ध,एकताबद्ध समाजका रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्छ । त्यो भरपूर सम्भावना छन् । यसमा हामी आशावादी हुनुपर्छ । स्रोत रातोपाटी
झलनाथ खनाल भन्छन्– एमाले बचाउने ब्रह्मास्त्र छ !, यस्तो स्थितिमा यहाँले भनेजस्तो समयानुकूल नेतृत्व आउँछ भनेर कसरी आशावादी हुने ?, रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्छ । त्यो भरपूर सम्भावना छन् । यसमा हामी आशावादी हुनुपर्छ ।, स्रोत रातोपाटी
भुर्तेल बने प्लेयर अफ दी सिरिज